MASAAJIDKII 334-AAD OO LAGA FURAY HARGEYSA | WWW.SOMALILAND.NO
MASAAJIDKII 334-AAD OO LAGA FURAY HARGEYSA
Posted on Maarso 24, 2008 by Abdirisak Fadal
Hargeysa (sl.no) 24march- Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Sheekh Maxamuud Suufi Muxumed, ayaa shalay Masaajid cusub oo laga dhisay Xaafada Jig-jigayar ee Magaalada Hargeysa xadhiga ka jaray. Masaajidkan shalay furmay oo ah kii 334aad ee ay yeelato Hargeysi, ayaa loo bixiyay Masjidul Cumar Cismaan, isla markaana waxa maal-galiyay Cabdi-casiis Cumar Cismaan, oo ah muwaadin reer Somaliland ah.
Waxa Xafladii furitaanka lagu qabtay isla Masaajidkan ka soo qayb-galay Masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Somaliland, oo ay ka mid ahaayeen Wasiirada Awqaafta, Arrimaha Guddaha, Badhisaabka Gobolka Hargeysa, Agaasimayaal iyo sidoo kale Culimo-awdiin tiro badan, Odayaasha Xaafadaas, Madax-dhaqameedyo iyo Marti-sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horeyna waxa munaasibadaa hadal ka jeediyay Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sheekh Maxamuud Suufi Muxumed, oo ku dheeraaday fadliga uu leeyahay qofka masaajid dhisaa. Isaga oo arrimahaa ka hadlaayana waxa uu yidhi, “Masaajid marka la arko diintii ayaa muuqata, Masaajidka waxa aqalka Illaahay loogu magacaabaa waa sharaf, waayo Nabigu (SCW) guri uu gacantiisa ula tagay ma jirin. Laakiin, Masaajid gacantiisa ayuu ku dhisay, maxaayeelay Masaajidku aad ayuu uga fadli badan yahay guryaha kale.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Diinta iyo Awqaaftu, waxaanu aad ugu mahad-naqay Muwaadinka Masaajidkan dhisay, waxaanu ku dhiirigaliyay dadka Xaafadaas degan in ay ku dedaalaan sidii ay u camiri lahaayeen Masaajidka, gaar ahaan Salaadaha Subaxa iyo Casarka, oo uu sheegay in ay aad u fadli badan yihiin.
Sidoo kale waxa isna halkaa ka hadlay Guddoomiyaha Gobolka Hargeysa Cali-asad Xasan, oo sheegay in ay nabadgalyadu saldhig u tahay wax kasta oo la qabanayo, “Wax kasta waxa saldhig u ah nabadgalyada, waxaan qabaa Masaajidada maanta dhismayaa ma dhismeen hadii aanay nabadgalyada aynu haysanaa jirin.” Ayuu yidhi Cali Asad, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waxa xusid mudan bogcadan masaajidka laga dhisay, oo berigii 77-kii ayaa dadkii Wajaale laga soo raray la dejiyay, maalintaa ayaa loo asteeyay in Masaajid laga dhigo, halkaana waxa soo gaadhsiiyay dadka xaafada oo ku dedaalay sidii uu u nabadgali lahaa dhulkani, waanay ku mahadsan yihiin.” Ayuu hadalkiisa raaciyay Guddoomiyaha Gobolku. Agaasimaha guud ee Wasaaradda diinta iyo Awqaafta Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in tirada masaajidadu maalinba maalinta ka dambaysa ay sii kordhayso, “Waad ogaydeen maalintii aynu qaxnay inta Masaajid ee magaalada Hargeysa ka dhisnaa, maantana halka ay marayaan waad ogtihiin, oo Masaajidkani waa Masaajidkii 334aad ee Hargeysa ka dhisma, waxa inoo sahlayna waa nabadgalyada.” Ayuu yidhi Agaasimaha guud ee Wasaaradda diinta iyo awqaaftu.
Sheekh Aadan Maxamuud Xiiray (Aadan-siiro), oo xafladaa ka hadlay ayaa yidhi “Wanaaga maanta Somaliland yaalaa dal Islaam ah oo uu yaalaa wuu yar yahay, Somaliland ha la ilaaliyo. Ma lihi Somaliland waa diin, laakiin, waa istaraajijiyad ummadi leedahay.” Ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro, waxaanu ku dheeraaday siirooyinka ka waramaya fadaa’isha Masaajidada.
Sheekh Maxamed Cumar Dirir, ayaa isna halkaa ka hadlay, “Aad iyo aad ayaynu ugu faraxsanahay Masaajidkan quruxda badan, inta aan magaalada Masaajidada ku yaala arkayay ha yaraada’e mid la qurux ah maan arag. Waxaan leeyahay sidaa aynu u faraxsanahay illaahay ha uga farxiyo muwaadinka dhisay Masaajidkan.” Ayuu yidhi Sheekh Cumar Dirir. Waxaanu aad uga hadlay ajriga uu masaajidku leeyahay. Sidoo kalana waxa halkaa ka hadlay xubno kale oo isugu jiray Salaadiin, Odayaasha xaafada, Ingineeradii Masjidka dhisay iyo Culimo-awdiin kale, oo dhamaantood ka hadlay qiimaha Masaajidku leeyahay, sid looga baahan yahay dadka xaafadu inay u daryeelaan masaajidkan. Isla markaana waxa ay aad ugu mahad-naqeen Cabdi-casiis Cumar Cismaan, oo ah muwaadinka isagu dhisay Maajidkan cusub.
« Soomaali lagu dilay magaaladda Oslo Qiso Jaceyl oo dhab ah “CUDUR-DAAR JACEYL” Qisadani waxay dhab ugu dhacday qoraaga sheekada »